Droits de l’Homme – MyDago.com aime Madagascar
Miantso ny FAT hampitsahatra ny fanenjehana ny mpanohitra ny Governemanta Amerikanina !
« Velom-panahiana mafy sy tsy tafandry mandry ny fitondrana Amerikanina manoloana ny fanenjehana niseho matetika tato ho ato sy ny fanapenam-bava ireo mpanao politika sy ny mpanao gazety manohitra ny fitondrana. Miantso ny fitondrana tetezamita hanaja ny zon’olombelona, tafiditra ao anatin’izany ny fahafahana maneho hevitra an-kalalahana sy ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety… Miantso ary mamporisika ihany koa ny fitondrana tetezamita sy ny mpitandro filaminana hampitsahatra ny fandrahonana amin’ny endriny rehetra atao amin’ny mpanao politika mpanohitra». Henjana sy hentitra ny fanambarana nataon’ny Fitondrana Amerikanina, notaterin’ny diplaomaty, Brett Bruen, mpanolotsaina misahana ny raharaha kolotoraly ao amin’ny masoivoho Amerikanina eto amintsika.
Tao anatin’ny andro vitsivitsy, hita ho nivoatra haingana tokoa ny fandehan’ny toe-draharaha politika eto amin’ny firenena. Nisongadina izany, taorian’ireny raharahan’ny Bani Ivato ireny, izay niafara tamin’ny fisamborana ireo manamboninahitra jeneraly sy manamboninahitra ambony maromaro voarohirohy tamin’ilay fanonganam-panjakana tsy nahomby farany teo. Izany dia mbola nialohavan’ny fisamborana sy fanagadrana ireo mpanao politika mpanohitra avy amin’ny ankolafy telo, toa an-dry Fetison Andrianirina, Zafilahy Stanislas, ary ny Pasitera Edouard. Miseho indrindra koa izao fidirana an-tsehatra indray ataon’ny fitondrana Amerikanina izao, taorian’ny fahatongavan’ny iraky ny Sadc eto amintsika ary indrindra, taorian’ilay antso nataon’ny Sekretera Jeneralin’ny Firenena Mikambana, ny amin’ny tokony hanaovan’ny fitondrana tetezamita tatitra momba ny fomba fitazonana ireo manamboninahitra voatana any am-ponja amin’izao fotoana izao.
Natsikafon’ilay fanambarana àry fa «voatohintohina ny zo amin’ny fahafahana maneho hevitra sy mivory am-pitoniana, ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety, ny zo manoloana ny fisamborana tsy amin’antony, ny fampidirana am-ponja, ny zo hahazo fitsarana tsy mitanila, ny zon’ireo voasambotra tsy mahazo mifanerasera amin’ny mpisolovava azy… ». Nanamafisana ireo moa ny zava-nitranga tamin’ny fanakanana ny mpanohitra tsy hahazo hanao fihetsiketsehana taloha sy taorian’ireny fitsapankevi-bahoaka ireny, ary ny fitazonana ireo olon’ny ankolafy telo tamina toerana tsy fantatra mazava… Ny talohan’ireo dia ireny fanakatonana radio sy fisamborana ary fanagadrana mpanao gazety tamin’ny fiandohan’ny taona ireny.
Vokatr’ireo, hoy ihany ilay fanambarana, dia nitotongana be, araka ny tatitra navoakan’ny Liberty House, ny toerana misy an’i Madagasikara eo amin’ny sehatry ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety. Nambaran’Atoa Brett Bruen fa « tsy manana anjara eo anivon’ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny fitondrana tsy manaja ny zo fototra maha olona ». Nilaza ny hanohy hatrany ny fanaraha-maso ny zava-miseho rehetra ny fitondrana amerikanina, ary hampiely izany amin’ny firenena manerana izao tontolo izao. Andrasana indray, araka izany, izay ho akon’ity fanambarana miezinezina nataon’ny amerikanina ity, eo amin’ny fivoaran’ny toe-draharaha.
Auteur Solo RazafyPublié le 1 décembre 2010 Catégories Malagasy, Négos, PolitiqueÉtiquettes BANI, Brett Bruen, Censure, Droits de l'Homme, Fetison Rakoto Andrianirina, ONU, Pasteur Edward, Prisonniers politiques, SADC, Stanislas Zafilahy, USA2 commentaires sur Miantso ny governemanta Amerikana !